सुन्दै रिस उठेर अाउने, यी कस्ता लाज पचेका बाउ? छोरी माथि नै यस्तो घिनलाग्दो कुकृत्य गरेपछि… – PathivaraOnline
Home > अपराध > सुन्दै रिस उठेर अाउने, यी कस्ता लाज पचेका बाउ? छोरी माथि नै यस्तो घिनलाग्दो कुकृत्य गरेपछि…
admin September 24, 2018 अपराध 0
सुन्दा फेरि पनि अचम्म लाग्न सक्छ । बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरे भन्दा । तर ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–११ मा गोदावरी (ए) बहादुरले ११ वर्षकी छोरी चापागाउँ (ग) कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भपतन गराएपछि घटना बाहिरिएको छ । अनुसन्धानपछि यो घटना सत्य सावित भएसँगै जिल्ला अदालतले बलात्कारी बाबुलाई २६ वर्ष कैद सजाय सुनायो । न्यायाधीश अवनी मैनालीको एकल इजलासले फैसला गरेकाे छ ।
अन्तिम आदेश जारी गर्दै गएको सोमबार यस्तो फैसाला सुनाएको हो । उनले आफ्नी छोरीलाई गएको चैत १५ गते बेलुकी साढे ९ बजेदेखि २०७५ साउन १० गतेसम्म पटकपटक गर्भ निरोधको कुनै साधन प्रयोग नगरी करणी गरेका थिए ।
१८ बर्षिया सम्झनाकाे चन्द्रनिगाहपुरबाट अायो एसिड अाक्रमणकाे यस्तो दुःखद खबर